Mkpochapu nke ụbọchị: Izere osote onye arụrụala | Ilblogdellafede
Ntụziaka nke ụbọchị
PETS - Billy
Ihe odide Paolo
Budata Ebook n'efu
Ndị mmụọ ozi
Iso Christianityzọ Kraịst
ntụgharị uche kwa ụbọchị
Ozi Katolik na ndị Katolik
Ezi ofufe n'oge nke ụbọchị: na-ezere ihe na-abaghị uru
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 6, 2020 Ọgọstụ 6, 2020
1. Nsogbu nke anaghi adi. Ọ bụla isi bụ ntaramahụhụ onwe ya; Ndị mpako chọrọ nkụda mmụọ ha, ndị anyaụfụ na-eweso ndị iwe iwe, emeghị ihe n'eziokwu na-agụsi agụụ ike, na-agwụ ike na-agwụ ike! Obi ụtọ na-adịrị ndị na-arụ ọrụ, ọ bụ ezie na ha dara ogbenye! N'iru onye na achoghi ya, obu ezie gouache na edo edo, i huru uhere, idi ike na otutu: ntaramahuhu nke anaghi agha. Gini mere i ji choo ogologo oge? Ọ bụ n'ihi na ị naghị arụ ọrụ?
2. Omume nke enweghị ọrụ. Mụọ Nsọ kwuru na arụ bụ nna nke arụ; David na Solomon zuru iji gosiputa nke a. Anyị emehiela ọtụtụ! Na-atụgharị uche na onwe gị: n'oge oge nke enweghị ọrụ, nke ụbọchị, nke. Abali, naani ma obu ya na nkpọko, have nwere ihe o jiri zuo onwe gi? Ọ bụ na enweghi nkịtị na-egbu oge dị egwu nke anyị ga-aza Jehova ọnụ?
3. Adọpụrụ aka ikpe, nke Chineke katọrọ: Iwu nke atọ ka Chineke dere iwu nke ọrụ. Ga-arụ ọrụ ụbọchị isii, na nke asaa ị ga-ezu ike. Niile, iwu nke Chineke, nke jikọtara steeti niile na ọnọdụ niile; onye ọ bula nke g breakstiwa ya n'efu n'azu ịza Chineke ajụjụ, eat ga-eri nri nke ọsụsọ dị gị n'ihu, Chineke sịrị Adam; Onye ọbụla na-adịghị arụ ọrụ, ọ naghị eri nri, ka Saint Paul kwuru. Chee echiche na ị na-etinye ọtụtụ awa na nkịtị ...
EGO. - Egbukwala oge taa; rụọ ọrụ n'ụzọ nke ịghọrọ ọtụtụ uru ebighi-ebi
Ihe edepụtaraDesọ nsọ
← Na post gara aga Gara aga post:Ngbanwe nke Onye-nwe, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 6
Ọzọ Post → Post ozo:Nkwenye nye Madonna nke 6 Ọgọst 2020 iji nweta ekele
chọọ ekpere gị ebe a
Soro ederede ekpere
maka ozi zipu ozi email na [Email na-echebe]
You chọrọ ka ịme ihe ngosi?
Mepee saịtị ma nweta ego na Altervista - Disclaimer - Kpesa mkparị - Ushma ọkwa - amụma nzuzo